Vidiyo: #Socialnomics 2014 | Martech Zone
Vidio: #Socialnomics 2014
#Socialnomics 2014 site Erik Qualman bụ usoro nke ise nke usoro vidiyo kacha lelee na Social Media. Vidio nke afọ a na-egosi oke oke dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka yana mgbawa nke ojiji nke puku afọ.
Anyị enweghị nhọrọ na ma ànyị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi. Nhọrọ bụ otu anyị si eme ya nke ọma. Erik Qualman
Otu ihe dị mkpa na nke a bụ na 20% nke okwu ndị etinyere n'ime ogwe ọchụchọ a chọtabeghị ya tupu - ịkwado mkpa maka mmemme azụmaahịa siri ike ebe a na-emepụta ma kesaa njikọ nke isiokwu, onyonyo, vidiyo, mmekọrịta mmadụ na ibe yana mgbasa ozi ndị ọzọ. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnọ ebe ndị na-ege ha ntị nọ - nke ahụ na-achọkwa ọkwa na iche iche.
Erik Qualman bụ # 1 kacha mma na-ere akwụkwọ na onye isi okwu banyere ndi ndu dijitalụ. Vidio bụ Equalman Studios. Isi mmalite data maka ọnụ ọgụgụ dị na vidiyo dị na akwụkwọ Socialnomics.
Tags: onye ọkachamarammekọrịta ọha